James Milner oo doortay xidiga ugu fiican kooxda Liverpool, isagoo iska indho tiray Mohamed Salah – Gool FM
James Milner oo doortay xidiga ugu fiican kooxda Liverpool, isagoo iska indho tiray Mohamed Salah
(Liverpool) 16 Jan 2019. Xidiga Liverpool James Milner ayaa doortay xidiga ugu fiican kooxdiisa Reds ilaa iyo haatan xili ciyaareedkan, isagoo dhinaca kale iska indho tiray xigaha Salah iyo van Dijk.
James Milner ayaa u arka in Alisson Becker uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican ilaa iyo haatan xili ciyaareedkan kooxda Liverpool, sababa la xiriira saameynta uu ku soo kordhiyay qeybta gadaale Reds tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Roma xagaagii lasoo dhaafay.
Alisson Becker ayaa wuxuu shabaqiisa oo nadiif ah ilaashaday 13 ka mid ah 22 kulan ay xili ciyaareedkan kooxda Liverpool ka ciyartay Premier League, waxaana laga dhaliyay 10 gool oo kaliya, taasoo ka dhigeysa inay yihiin kooxda ugu difaaca wanaagsan Premier League.
Hadaba wargeyska “Metro” ee dalka England ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay James Milner, kaasoo uu kaga hadlay arigtidiisa xidiga ugu fiican ilaa iyo haatan xili ciyaareedkan kooxda Liverpool.
“Way adag tahay in la doorto hal ciyaaryahan, sababtoo ah qof walba wuxuu gaaray natiijooyin fiican”.
“Laakiin aniga ahaan waxaan qabaa in Alisson Becker uu yahay kan ugu fiican, gaar ahaan tan iyo markii uu ku biiray horyaal cusub, mana ahan wax fudud”.
Jordi Alba oo ugu dambeyntii go’aamiyay mustaqbalkiisa kooxda Barcelona, muxuuse ka yiri saaxiibkiis Messi?
“Ma ilaawi doono goolkeygii ugu horeeyay La Liga, xili kasta goolasha kulamada El Clásico waa kuwo gaar ah” Messi